ယုံကြည်စိတ်ချရသောနွေရာသီ Interns * မရသော * (ဇွန် - သြဂုတ်လ 2019) | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ကိုး စား. နွေရာသီဝင်ရောက်ပြီး * မရတဲ့ * (ဇွန်လ - သြဂုတ်လ 2019)
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ခွငျးအဘို့အနွေရာသီဝင်ရောက်ပြီး * မရတဲ့ * (ဇွန်လ - သြဂုတ်လ 2019)
client ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာစီမံကိန်းများအတွက်ကို Photoshop, Illustrator နှင့် InDesign အတွင်းအလုပ်လုပ်ရန် (သတိပြုပါ :. ခွငျးအများပြည်သူအတွက်ဆက်သွယ်ရေးစုပေါင်းထောက်ပံ့ကျွမ်းကျင်မှုသည် ...
SJGolden - 2019-04-16
ယခင်: အမေရိကန်တလွှား '' စစ်တိုက် Royale '' တိုက်ရိုက်ဂိမ်းကစားခြင်းဖြစ်ရပ်များကိုဖန်တီးရန်ရောနှောအတူတက် Make.TV အဖွဲ့များ